ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်၏အိပ်မက်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ဖို့ Want? Ants ထံမှသင်ယူ
သင်၏အိပ်မက်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ဖို့ Want? Ants ထံမှသင်ယူ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 09 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဤသူသည်သင်တို့မှအကြိမ်မည်မျှဖြစ်ပျက်ခဲ့? သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်သင်တဲ့ဘားမှာရပ်နေနှင့်သင်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမိန်းမကိုမြင်. သင်သည် dibs ခေါ်ပြီးတော့မျဉ်းနှင့်အတူတက် လာ. ရန်ပျက်ကွက်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုမိန်းမသည်လိုင်းနာ​​းကြားခြင်းငှါအလိုသည်ဟုခံစားရပေမယ့်နိုင်ပါတယ်, ကောင်းစွာ, သင်လျှာကိုချည်ထားကြသည်. အဲဒီအစားအထပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုသင်တို့အားပေးတက်အဆုံးသတ်ထိုမိန်းမသည်ကိုယ်အဆွေခင်ပွန်းအားဖြင့် floored လာဆောင်မှာ, "ကြောင်သင်၏လျှာရင်း?"
အသီးအသီးကကျောင်းအတွက်အချစ်နဲ့၎င်းတို့၏ဝေစုရှိခဲ့ပါတယ်. သူမ၏ထဲကယူ - သင့်အသက်တာ၌လည်းသင်နှင့်အတူဒါအများကြီးလုပ်ဖို့လိုသောဤမိန်းကလေးရှိ၏, ရုပ်ရှင်သွား, လက်ကိုကိုင်ထားနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်. သင်တို့မူကား, ရဲစွမ်းသတ္တိကိုတက် Sum ဘယ်တော့မှရနိုင်တော့မှာ - သင်မထိုက်မတန်ဒါမှမဟုတ်သင်အမြဲကျောင်းသို့ Adonis ၏လက်ရုံးရှိသင်၏အိပ်မက်မိန်းမကိုမြင်မယ်လို့ထင်ဖြစ်စေ. တဖန်သင်တို့တိတ်တဆိတ်အပ်ပေး၏, သူမနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားနဲ့သက်ပြင်းသာ.
လုံးဝခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ - သင်ပုရွက်ဆိတ်တွေအကြောင်းဘာသိကြပါ? သင်အမှန်တကယ်အဲဒီသေးငယ်တဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားမဆိုအတွေးမခံရကြသေး, သင်ရှိသည်? သင်သည်ပုရွက်ဆိတ်၏ကိုလိုနီမြင်သောအခါသင့်စိတ်ကိုမှဆင်းသက်လာသောပထမဦးဆုံးအရာကသူတို့ကိုပါရှိသောရန်ဖြစ်သည်.
အက်ဥပဒေ #1 - ဖြစ်ပျက်ဖို့မစောင့်ပါနဲ့
ပုရွက်ဆိတ်တွေပြောင်းရွှေ့အပေါ်အမြဲတစေများမှာ; သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ. အမျိုးသမီးအများစုဟာတာဝန်ခံယူသောသူသည်လူကိုချစ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိပ်မက်မိန်းမသည်သင်ထံသို့လာကြနှင့်မေတ္တာကိုအဆိုပြုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစောင့်ရှောက်လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်သင်ကြိုက်အမျိုးသမီးအများစုမေ့လျော့နိုင်. သင်ကြမ်းပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးသည်သူမ၏ရိုးရှင်းစွာထလိုက်သွားတတ်နှင့်သင်သူမ၏ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြော. အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ခုနှစ်တွင်သူတယောက်မျှမရှိဟုဆိုလိမ့်မည်.
အက်ဥပဒေ #2 - အရှုံးမပေးပါနှင့်
ပုရွက်ဆိတ်တွေဆေးလိပ်မဖြတ်ကြဘူး - မိမိတို့ destination သည်ကိုသိကြပြီးကျရှုံးနဲ့အာရုံထွေပြားများကြားတွင်ကရောက်ရှိ. သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပယ်ချခဲ့? စိတ်မပူပါနဲ့; ဒါကြောင့်အသက်တာ၏အဆုံးမင့်. ထပ်ကြိုးစားပါ ... သူတို့အချိန်ပယ်ချခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်ကြသောအခါနောက်ဆုံးတွင်ပင်သူတို့၏အမျိုးသမီးများ woo မှစီမံခန့်ခွဲသောသူတို့သည်လည်းထိုရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းများ၏စဉ်းစားပါ.
အက်ဥပဒေ #3 - အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံရ
ပုရွက်ဆိတ်တွေပန်းတိုင်နှင့်တိကျသောအာရုံစိုက်ရှိသည် - သူတို့သိထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသေဖို့ကိုချည်နှောင်နေသောခိုင်ခံ့ကြိမ်မကယ်မနှုတ်နိုင်လျှင်. သင်ကြမ်းပြင်လိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကြိုက်လျှင်ကျောသူမ၏မှရတဲ့စောင့်ရှောက်. ရုံသင်သည်သင်၏လိုင်းများနှင့်စတိုင်ကိုပြောင်းလဲသေချာ.
အက်ဥပဒေ #4 - သင့်ရဲ့လိုင်းတွေကို Save
ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအချို့ကို စား. သူတို့အချို့ကိုကယ်တင်. အဖြစ်ဝေးမိန်းမသည်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုတဦးတည်းသွားအားလုံးကိုသင့် ammos ပစ်လိုက်ပါမသင့်. ရယ်စရာဖြစ်; ဖန်တီးမှုဖြစ်နှင့်မူရင်းဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာသူမဟာကိုယ်တော်၏ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်ဦးမည်.
ပုရွက်ဆိတ်တွေအရေးဖြစ်ကြောင်းတော့ဘူးခံစားနေရတယ်မ, သင်မည်? ဟုတ်ကဲ့, သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘဝများစွာကိုအရေးကြီးသည်သင်ခန်းစာတွေသင်ပေး, သူမ၏ flooring အားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ရှေးအကျဆုံးတဦးအပါအဝင်. သငျသညျသငျသညျအထပ်ချင်ဤမိန်းမရှိပါကရိုးရိုးဒီမှာပုရွက်ဆိတ်တူပြုမူ. ထိုအခါကျောလာနှင့်သင်၏အိပ်မက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအခြား Adonis အားဖြင့်ပယ်ရှား whisked ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့နေဆဲသက်ပြင်းခံရလျှင်ငါ့အားပြော.
5 A Great ပထမဦးစွာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အထင်ကြီးစေရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
လာသောအခါဆက်ဆံရေးအသစ်ညဉ်းဆဲရန် "ကို Right Time ကို" Is?